Brazil:Olimbikada Rio 2016 oo ka duwan middii London 2012 – Kasmo Newspaper
Brazil:Olimbikada Rio 2016 oo ka duwan middii London 2012
Updated - August 13, 2016 1:41 pm GMT
Cayaaraha Olimbikada Rio 2016 ee ka soconaya Brazil iyo kuwii ka horreeyay ee London 2012kii ayaa aad u kala duwan,laga soo bilaabo xafladihii furitaanka,waana sheeko iskeed isu fasiraysa.
Bandhigyada garoommada iyo goobaha kale ayaa aad u abaabulan,laakiin yaa loo dhigayaa? Kurasida midabyada leh ee garoommada tartannada Rio badankood waa maranyihiin.
Ciriiriga siyaasadeed iyo midka dhaqaale ee dalka ka jira ayaa muhimmaddii ay lahaayeen ka qaaday cayaaraha: dhinac dadweyne ka walaacsan aayaha dalkooda,dhinacna iyaga oo an gadan Karin tikidhada oo u dhexeeya 6-20 Dollar.
Waxaa kale oo tixgalin mudan cabsida argagixisada,fadeexaddii kooxda Ruushka ee dawooyinka tayada cayaartoyda (Doping),iyo jawiga dalka oo ah xilligii qaboobaha Brazil.
John Coates,Guddoomiye ku-xigeenka Hay’adda Abaabulka ayaa sheegay in ay tahay “Olombikadii ugu dhibka badnayd taariikhda”,taas oo si aad ah uga duwan middii London oo malmihii horeba lagu leefay tikidhadii cayaaraha lagu galayay. Maalmihii ku soo xigayna,ka soo qaybgalka daawadayaasha,xitaa tartannada yaryar,aad u sarreeyay.
Tirada rasmiga ah waxaa ay tilmaamaysaa in,qiyaastii,84%,tirada guud ee tikidhada la iibiyay,laakiin kumannaan boos an cidi fadhiyin,xitaa intii ay socotay xafladdii furitaanka. Taas oo ka muuqata sawirrada faraha badan ee lagu baahiyay Baraha Bulshada,oo muujinaya,qaybo idil oo garoommada ah oo maran.
Akhri sheeko la xiriirta:/rio-2016-dhibaatooyinka-brazil-ee-ku-qarsoon-daaha-olimbikada/